Kenya Inonongedza Tourism yeAfrica Kudzikisira COVID-19 Impact
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kenya Kupwanya Nhau » Kenya Inonongedza Tourism yeAfrica Kudzikisira COVID-19 Impact
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Kenya Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kenya Tourism Board inowedzera kuyedza kushambadza Kenya kune dzimwe nyika dze Africa nekunangisa misika yakakosha mudunhu reAfrica.
Kenya yanga iri nzvimbo yevashanyi kumisika yeEast neCentral Africa, ichivimba nebasa rayo rakasimba remhepo uye nemhando yepamusoro yekugamuchira vaeni.
Kenya Tourism Board yakaita musangano mukupera kwesvondo nevashandi vekushanya kubva kuUganda, Rwanda neEthiopiya muguta rekushanyirwa reMombasa.
Tourism mu Africa inorongwa semusika unokurumidza kukura pasi rose, nyanzvi dzekufambisa dzichiona huwandu hwekushanya kukondinendi iyi kunge hwakura nechikamu che8.6%.
Kubhengi pamusika wakapfuma uye usina kuwanikwa muAfrica mushambadzi, Kenya ikozvino iri kutora matanho akasimba ekukwezva vashanyi vanobva kune dzimwe nyika dzeAfrica, vachida kukurumidza kudzoka kwekushanya mushure mekudonha kwakakonzerwa nedenda re COVID-19.
Kenya Tourism Board (KTB) ane mumwedzi wapfuura akasimbisa kuyedza kushambadza Kenya kune dzimwe nyika dze Africa nekunanga misika yakakosha mudunhu reAfrica.
Yakapfuma nemhuka dzesango, nhoroondo nemagariro, Kenya iri pakati penyika dzemu Africa dzakatambura nedambudziko re COVID-19 denda rakaonekwa kubva pakadzikira kwevashanyi kubva kumisika mikuru yeEurope neUnited States yeAmerica.
Kenya yanga iri nzvimbo yevashanyi kumisika yeEast neCentral Africa, ichivimba nebasa rayo rakasimba remhepo uye nemhando yepamusoro yekugamuchira vaeni kune dzimwe nyika kuEast neCentral Africa.
Tichitora mukana wezvese zvakasimukira masevhisi emhepo, hotera uye pekugara zvivakwa zvine hunyanzvi hwakasarudzika uye nzvimbo yekufambisa, Kenya ikozvino yave kunanga vashanyi vemuAfrica kuti vatsigire nekuzadza mukaha unokonzerwa nekudonha kwekushanya kwenyika.
Kenya Tourism Board (KTB) yakazivisa nguva pfupi yadarika kuti kushambadzira kweKenya senzvimbo inokwezva yevashanyi vanobva kune dzimwe nyika kwakasimbiswa mushure mekurerutswa kwezvirambidzo zvekufamba kweCOVID-19 nenyika dzinoverengeka dzeAfrica.
Mukuru weKTB Corporate Affairs Manager Wausi Walya akati kune vazhinji vashanyi uye mikana yekufamba munzvimbo mbiri dzekuEast Africa nemusika wemuAfrica uyo Bhodhi rakagadzirirwa kutora kuburikidza nemapuratifomu akasiyana siyana kusanganisira nhepfenyuro.
The Board yakabata musangano svondo rapfuura nevashanyi vanobva kuUganda, Rwanda neEthiopia mutaundi regungwa revashanyi reMombasa.
Kenya ichave ichironga nzendo dzakasiyana siyana dzevashanyi vemuAfrica kuti vadzidze nezvinoyevedza munyika, kusanganisira mahombekombe egungwa, nzvimbo dzekuchengetedza mhuka dzesango nenzvimbo dzekuchera matongo, akadaro Walya.
"Kenya inoona musika wekushanya muAfrica senzira yakanaka, neUganda iri kutungamira kuwanda kwevashanyi munyika ino", akadaro.
Kufamba kuri kuitwa neKTB kwaizowedzera vashanyi panguva ino apo kushanya kwepasirese kuri kudedera kubva pamhedzisiro ye COVID-19 denda.
Dare iri kurongawo kuitisa nzendo dzekuziva kunzvimbo dzinoverengeka dzinoyevedza muKenya, nechinangwa chekukwezva kushambadzira kwekushanya kuti vaenzanise kuenda kweKenya nehukuru hwayo hwekushanya kukwezva misika yedunhu neyemuAfrica.
Biraga ry'ibikorwa rikomeye ryemejwe n'abaturage 15 b'abanyarwanda b'u Rwanda, Rwanda na Ethiopia.
Boka revashanyi vemunharaunda rakashanyira nzvimbo dzakakosha dzevashanyi muNairobi, Nanyuki, Maasai Mara, Tsavo, Diani, Malindi neWatamu pachinangwa chekuona dzakasiyana siyana dzekushanya Kenya inogona kupa kune vese vemuAfrica nevepasi rese vanoita safari.
Tourism mu Africa inorongwa semusika unokurumidza kukura pasi rose, nenyanzvi dzekufamba dzichiona huwandu hwekushanya kukondinendi iyi kunge hwakakura pamwero we8.6 muzana mumakore apfuura zvichienzaniswa neavhareji yepasirese yepfumbamwe muzana.
Kenya Tourism Board yaive yaona kuti kusimudzira kushanya pakati pe Africa panguva imwechete kunogona kukurudzira kuburitswa kwemikana mukati meAfrican Continental Mahara Ekutengeserana (AfCFTA) nechishuwo chekusimudzira kukura nekubatana pakati penzvimbo dzekushanya dzemu Africa kuti vawane mukana uripo mukondinendi.
Tanzania neKenya vakatsigira mafambiro emahara kwenzendo dzedunhu neyekunze kwenyika mushure mekunge vatungamiriri venyika dzakavakidzana vabvumirana kusimudzira kufamba kwenzvimbo nekufamba kwevanhu.